Dia fitetezana ny tontolon’ny bilaogy Kiorda · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 4:36 GMT
Araka ny notaterin'ny Kurdistan Blog Count, tsikaritra ireo bilaogy Kiorda vaovao maromaro amin'ny teny Anglisy. Ny voalohany amin'ireo dia ny Talk about the Passion izay soratana Amerikana iray handeha hampianatra mandritra ny enim-bolana manaraka any avaratr'i Iraka/Kiordistan Atsimo. Raha vao nanomboka nampianatra tao izy dia efa nandefa lahatsoratra mahaliana momba ny hena sendra azy. Ny lahatsoratra faharoa voatonona dia antsoina hoe my Personals izay natomboka tamin'ity herinandro ity. Ny voatanisa fahatelo dia antsoina hoe me, myself and I (including you) izay ahitana resaka mahaliana momba ny ny fanagadran'ny governemantam-paritra Kiordistana an'i Dr. Kadir.
Vladimir ao amin'ny From Holland to Kurdistan kosa manana lahatsoratra mahafinaritra mitantara ny vaovao rehetra momba an'i Kiordistana lehibe. Manana tantara manokana momba ny fanavakavaham-bolon-koditra izay sendra azy nandritra ny fiarahana tamin'ny namana Kiorda tany Holandy ihany koa izy. Vaovao hafa nosoratan'i Vladimir tamin'ity herinandro ity ny vaovao momba ireo banky Tiorka izay hisokatra ao Kiordistan, ny mpitarika ny PKK milaza fa “te-hanimba azy i Torkia”, ary ny vaovao momba ny fanohanan'ny Tiorka sy Kiorda ny fifampiresahan'ny Vondrona Eoropeana amin'i Torkia.
Roj Bash manoratra momba ny fasana tambabe hita tany Iraka ary manana lahatsoratra fanomezam-boninahitra ny tsingerintaonan'ny famoronana ny repoblika Kiorda voalohany naorina tany Iran..
Manana lahatsoratra vaovao roa mitondra ny lohateny hoe (tiako ny lohateniny!) Saron-tava sy Fahakiviana – Filan'iza no omenao fahafaham-po? ary Torkia, ny OIC, ary ny feo Kiorda i Rasti.
Tamin'ity herinandro ity dia nandefa rohy mankany amin'ny lahatsoratra navoakan'ny gazetiboky vaovao National Geographic izay nanasongadina lahatsoratra momba ny Kiorda any avaratr'i Irak/Kiordistan Atsimo ny Sendikan'ny Bilaogera Kurdistan.
Miverina miaraka amin'ny vaovao farany momba ny Fiarahamonina Kiorda ao Tennesse i Nashville Kurds Daily rehefa niato 2 volana.
Raha mitady tranonkala manome vaovao farany tsy tapaka momba an'i Iran ianao, dia ny East of Kurdistan no toerana tena tsara hanombohana. Lahatsoratra manintona (ao anatin'ny maro) amin'ity herinandro ity ny Tatitra momba ny Zon'ny Olombelona ao Iran, ny vaovao momba ny fivorian'ny governemanta Iraniana hiatrehana ny krizy iraisampirenena amin'izao fotoana izao ary ny fanakanana ny BBC Persiana ao Iran.
Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes, ankoatra fananana olana amin'ny Amazon UK manoratra momba ny tsy fahafahan'ny governemanta Irakiana vaovao hanao zavatra amin'izao fotoana izao sy ny tranga mampalahelo momba ilay lehilahy Kiorda nogadraina nandritra ny folo taona teo ho eo noho ny halatra palitaon'ny mpiasan'ny governemantam-paritra Kiordistana.
Amin'ny herinandro manaraka indray!